MysticBr - Portal yeMystique - Zviroto, Minamato uye Mabhafu
Munamato kuti akutsvage mukupererwa (Kunyangwe nanhasi)
Munamato wekunetsa musoro wemurume
Munamato wemweya wekuita kuti rudo rupenge
Kurota imbwa muMhuka Game
Kurota nezvehove muMhuka Game
Kurota uchitaura nemunhu akafa
Bath kukwezva mudiwa
21:21: Zvinoreva mumaawa Akaenzana
Maawa chaiwo: Zvinoreva Maererano neNhamba dzeNhamba
MysticBr – Portal yeMystique – Zviroto, Minamato neBath
Welcome to MysticBr! Pane ino saiti isu tichakubatsira iwe kutsanangura iyo zvinoreva zvese zvakatenderedza hupenyu hwako. Isu tiri boka revanhu vakazvipira kune ruzivo uye pane yedu webhusaiti iwe unogona kuwana minamatokana hope pfungwa wakawana uye kunyange kuwana chinangwa muupenyu hwako kuburikidza nenhamba.
Pazasi isu tinokutungamira kuburikidza newebhusaiti yedu, asi usati watanga unogona kushandisa injini yekutsvaga pazasi kuti uwane zvauri kutsvaga:
Wamuka pakati pekurota here? Uri kunetseka here kuti izvozvo zvingarevei? Muchikamu chino chekutanga tichatsanangura kuti sei uri kurota pamusoro pezvinhu izvi uye zvazvinoreva muupenyu hwako.
Kurota baba vakafa
Kurota kwemunhu akafa uye muchiroto mupenyu
Kurota ambuya vakafa
kurota pamusoro phlegm
kurota tsvina yembwa
Kurota tsvina yemunhu
kurota munhu achichema
Rota nezverufu rwako
kurota munhu achiedza kukuuraya
kurota pamusoro pekudzingwa
Kurota murume akafa kare
Kana uchida kutsvaga chishamiso chehumwari, unogona kutendeukira kuminamato inotevera, ingave yekuzvibatsira muhupenyu hwako kana kubatsira shamwari/nhengo yemhuri. Unogonawo kunyengeterera vanhu vasisiri pamwe chete nesu.
Munamato Mutsvene Cyprian kudzosa rudo
Munamato wekuti munhu aende kure
Munamato waSt Cyprian wekuti Upfume
Munamato wekuputsa kutuka
Munamato wekuti arasike shuwa
Munamato wekuti mukomana adzoke atendeuka
Munamato weSaint Cyprian kudzinga vavengi
Munamato weMutsvene Cyprian Black Cover
Namata kuti Mwari vabate mwoyo wemunhu
Munamato waLucifer wekuti anzwe kuzvidemba
Munamato wekuita kuti murume akupotsa apenge
Munamato wekubvisa mumwe munhu muhupenyu hweumwe
Munamato weKugona Kwepfungwa neMwoyo
Namata wakasimba kudaidza munhu
Munamato wekukunda muvengi
Muchikamu chekupedzisira tichataura pamusoro pemabhati ekudzikisa, kuti angashandiswa sei kuchenesa muviri wako wemasimba asina kunaka uye kuti ungagadzirira sei.
red rose kugeza
Sinamoni yekugeza kukwezva varume
Basil Bath yeRudo
Munyu wakaoma uye rosemary yekugeza
Clove, sinamoni uye bay leaf bath
Bhati nesinamoni uye shuga
Munyu wakakora uye kugeza shuga
White rose kugeza kuvhura nzira
Bath kuve anoyevedza
Cinnamon uye Clove Bath
kugeza munyu wakakora
kugeza kwe7 herbs
Iwe unogona kushandisa ruzivo rwako rwenhamba kuti unzwisise mamiriro ehupenyu hwako kuburikidza nenhamba. Heano wongororo yedu yakanaka:
Maawa Akaenzana: Zvinoreva Maererano neNhamba dzeNhamba
Inverted Maawa: Zvinoreva Maererano neNhamba dzeNhamba
Ndiani wandaive muhupenyu hwekare nezuva rekuzvarwa
Ndiani wangu Guardian Ngirozi: Nzira yekuziva sei nezuva rekuzvarwa
Ziva soulmate nezuva rekuzvarwa
Uye ikoko kunoenda gwara redu rekufambisa! Kana uine chero mibvunzo, unogona kushandisa fomu rekuonana kukumbira rumwe ruzivo kana kutibvunza mubvunzo.
Aihwa MysticBr iwe unowana zvinoreva zviroto pamhepo, minamato yakasiyana-siyana, yekudzikisa mabhati uye kunyange manhamba nemusi wekuzvarwa.